Ndeapi mitambo yemvura yandingaite neApple Watch 2 Series 2 | Ndinobva mac
Kugeza neApple Watch kunogoneka here? Izvi ndizvo zvaunogona uye zvausingakwanise kuita
Zvekare zvakare Apple inojekesa kuti kuda kwayo ndeyekuti zvishandiso zvayo zviende nesu chero nguva yezuva, uyezve, iyo Apple Watch ndiye shamwari yakakwana yekuipfeka pachiuno chako kwenguva yakareba sezvinobvira.
Asi tinogona kuipfeka zuva rese? Ehe, zvichienderana nebasa raunoita, asi ne Nhepfenyuro dzeApple 2 Isu tinowedzera huwandu hwemaawa ayo gadget yedu ichave nesu, nekuti ikozvino unogona kubatana nesu mushower kana mudziva.
Chii chinonzi Apple nezvazvo? Kufanana neyakatangira, zvinomira mvura inoputikandiko kuti, inosanganisira iyo IPX7 maitiro. Asi iyo inonyanya kukosha ndeye iyo itsva yekudzivirira mvura system, iyo inobvumidza iwe kunyudza kusvika pamamita makumi mashanu, sezvo iine iyo ISO 22810: 2010 chitupa. Aya mazita anotitaurira kuti yakapasa bvunzo dzese dzekudzivirira mvura kana ukaita zviitiko zvisina kudzika zvemvura: kushambira, rafting, polo yemvura kana iwe unoshanda munzvimbo ine mwando wakakwirira.
Kune rimwe divi, Apple haikurudziri kuenda kumberi, sezvo isingavimbise kushanda chaiko. Tiri kutaura nezvekusvika pakadzika padhuze padhuze kana kupfuura makumi mashanu emamita, kusvetuka kwemvura kana kutamba mitambo uko wachi iri pachena kunaya uye kumhanya kwazvo.
Unoshamisa tekinoroji inoshandiswa kune wachi, kuitira kuti inyudza, asi panguva imwechete kurira kwainoburitsa kunogona kunzwikwa kana tangobuda mumvura. Kana iwo maviri madiki masipika ayo aanosanganisa mune yekumusoro chikamu chekuruboshwe akavharirwa nezvinwiwa, ruzha harubudiswe. Naizvozvo, hunyanzvi hwaApple mune izvi inzira inokwanisa bvisa mvura yacho usati waita ruzha, zvekuti 100% inoenderana kuti unzwe ruzha, chiziviso kana meseji yeSiri uchangobuda mudziva kana kugeza.
Kana iyi kana imwe nhau yakukodzera, kubva mangwana Nyamavhuvhu 9 inogona kushandirwa pane Apple webhusaiti uye Ichatanga kutengeswa inotevera Gunyana 16.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kugeza neApple Watch kunogoneka here? Izvi ndizvo zvaunogona uye zvausingakwanise kuita
Mavhidhiyo ehurukuro yaSeptember 7 ave kuwanikwa paYouTube
Apple inoburitsa Golden Master vhezheni ye macOS Sierra